ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လက်ပံတောင်းတောင်သပိတ်စခန်းတွင် မဂ္ဂင်ဆရာတော် ဦးအိန္ဒြကမှ မကြောက်တရား ဟောကြား (၂-၃-၂၀၁၃)
လက်ပံတောင်းတောင်သပိတ်စခန်းတွင် မဂ္ဂင်ဆရာတော် ဦးအိန္ဒြကမှ မကြောက်တရား ဟောကြား (၂-၃-၂၀၁၃)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 7:36 PM
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က အစီရင်ခံစာ ဘာဖြစ်လို.
အချိန်ဆွဲ ပြီးမထုတ်ပြန်တာ ပါလဲ ၊ ၈၈ အဖွဲ.ကရော
ဘာဖြစ်လို. နှုတ်ဆိတ် နေတာလဲ၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကိစ္စ မရှင်းရဲတာပါလဲ ၊
မြန်မာ.နိုင်ငံရေးမှာ ' Can not' တွေ များ နေရင် ပြည်သူတွေ ဒုက္ခေ၇ာက်ဖို.ဘဲ၇ှိတယ် ။ ။ ။